Akka Oromoon Itti Jiru….! Naannawaa FInfinneetti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAkka Oromoon Itti Jiru….! Naannawaa FInfinneetti.
Akka Oromoon Itti Jiru….!Naannawaa FInfinneetti.
Yoo Fetee Ammani yoo fetee dhisii InjifannooWBO!
Guyyaa har’aa W/Lixaa Aanaa Begiitti Humna Goolessituu waraana wayyaanee Raayyaa ittiisa biyyaa 45 ajjeese 8 fayyaa ishee booji’eera.Gama WBOn madoon tokko illee hin jiru! Karaa kibba Oromiyaa Mooyyaaleettis akkasuma daaresse jira!injifannoon galanuun baranuma.
DOM News-Another Documentary Film is Loading….
OPDO’n dhimma WBO Lixaa irratti documentary sobaa qopheeffachaa akka jirtu irra gahamee jira.
Akkuma waggootii 27’n darban wayyaaneen dokumantarii nufisiisaa fi hifachiisaa walirraa hincitne qopheessuun maqqaa dhaabilee siyaasaa adda addaa xureessaa turte har’as OPDO’n Adda Bilisummaa Oromoo fi WBO Lixa Oromiyaa keessa socho’u kijibaan maqaa xureessuuf qophii guddaa taasisaa jirti.
Qophiin dookumantarii diraamaa sobaan guutame kun garee tikaa tigirticha Dammallaash G/Mikaa’eel jedhamuun hoogganamaa jira.
Haaluma kanaan “ABO’n qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf fedhii hin qabu; kanaaf kan ragaa nuuf ta’u sagalee ajajaa WBO Lixa Oromiyaa waraabbannee of harkaa qabna “ jechuun olola sobaa gola OPDO keessatti xaxaa jiru.
Qabxiileen dokumantarii kana keessatti bal’inaan irratti ololamu:
1. OPDO’n ABO waliin dubbachuun rakkoo jiru karaa nagaa furuuf garaa bal’inaan tattaaffii ol’aanaa taasisuu fi ABOn garuu waliigaltee kan diige ta’uu, fi
2.ABO’n jaarsolee biyyaas akka dideetti dhiyeessuu dha.
Qabxiilee maqa xureessii kana dhugaa fakkeessanii dhiyeessuuf maqqaa “jaarsolee biyyaa fi xiinxaltoota siyaasaan” jala deemtonni OPDO qopheeffamanii jiru.
Walumaagala OPDO’n duula dokumantarii sobaa qopheessuu itti fufuun ABO xapha qabsoo karaa nagaa ala gochuun filannoo dhufu qofaa dorgomtee aangoo mootmmaa dhuunfachuun itti fufuuf abjuu qabdu fiixaan baafachuuf wixxifachaa jirti.
WBO f Qeerroon Fiilmii dalagamaa jiru kana tuffadhaa bira kutaa…
Hin Shakkinaa Ee Maallaqumaa!!
Kan suuraa armaan gadi irratti argitan kuni DALLAYA 4 KIILOO yookin MASARAA MOOTUUMMAA XOOPHIYAATI.
Biyyattiin sun EENYUMAAN ISHEE kanaadha jedhamtee adunyaa irratti beekamtiin..
HARDHALLEE MOO #QEERROO_ADAAMAA…
Guyyoota gurraacha dabarsinee mitii kan hardhas keessa jirru hin dagannu yoomuma.
Kunooti FINFINNEEN lafaafii hambaan hafte guutuun saba AMHAARATIN akka guuttamtuu NAANNOO amhaaraa irraa fiduun FINFINNEE keesatti WARAQAA EENYUMMAA akka fudhatan godhaa jiru…
#OROMOO_CARRAA_DARBEEN boohuun bu’aa nuuf hin qabu.
DILLAA UNIVARISTY rakkoollee deemaa jiruuf ariitiin furmaata godhan malee, gara haala hamaatti cehaa jira.
Baratoonni keenya of eegganoo cimaa fi gamtadhaan socho’uu akka qaban itti nuuf dhaamaa maaloo